Buugga Bundesnachrichtendienst - Xuquuqda Aadanaha & Farshaxanka Fudud ee ∴ PixelHELPER Foundation
Sirdoonka dowladda dhexe
Waxaan nahay Buntesnachrichtendienst - kaqeybgal dimoqraadi ah oo dheeri ah
Post Sticky By Oliver Bienkowski On 20. April 2014
Buntesnachrichtendienst wuxuu taageeraa dhaqdhaqaaqayaasha iyo dhaqdhaqaaqyada asalka u ah ka shaqeynta isbedelka nidaamsan ee guud ahaan Yurub. Fannaaniinta iyo ganacsatada ka kala yimid adduunka ayaa maalgeliya adeegga sirdoonka midabka leh ee u dhaqdhaqaaqayaasha xorriyadda ka siiya xabsiyada, waxay ka caawiyaan ubaxyada iyo daahfurka musuqmaasuqa adduunka oo dhan. Waxaan u dhaqmaynaa si qarsoodi ah cadawgeena waa inay si dhab ah noo qaataan. Waxaan ku kalsoon nahay xorriyadda farshaxanka iyo xorriyadda muuqaalka.
Codso hadda - adduunyo midabo badan leh!
Warar ayaa soo baxa oo adduunka oo dhan ku faafaa ilbiriqsi kasta. Wararka qaar kadib, adduunku wuxuu umuuqdaa inuu si kaduwan sidii hore usii jeedinayo. Warku wuxuu saameeyaa nolosheena. Waan kula kacaynaa oo waxaan ku geyneynaa habeenkii. Meel kasta oo ay adduunka ka joogto wakhti kasta, balanbaalis baalasheeda ayaa laalaabaa. Waxna way soo bixi karaan oo macno noo leh. Teknolojiyada casriga ah ayaa adduunka ka dhigay mid yar. Laakiin khilaafaadka gobolka iyo kuwa adduunka ayaa umuuqda inay sii kordhayaan. Dad badan ayaa isweydiiya qofka aad aamini karto. Macluumaadkee wali lagu kalsoonaan karaa iyo inay nabad iyo barwaaqo Jarmalka sii socoto. Tani waa meesha saxda ah ee hadafkeenu ka bilaabmayo. Shabakadda caalamiga ah waxaan ka abuuraynaa aasaas la isku halleyn karo, mararka qaarkoodna khatar sare ku jirta, maxaa yeelay waxay qaadataa dhererka cududda hore si ay ula dhaqanto si masuuliyad leh. Isdhexgal & daacad u ah dadka inay ilaaliyaan Jarmalka.
TED Kahadal kormeerka
State Monitoring: "NSA ee Golaha"
United Stasi America waxay taagnaayeen darbiyada safaarada Mareykanka ee magaalada Berlin iyo qunsuliyadaha kale ee Mareykanka ku leeyahay Jarmalka, oo ay ku jiraan Düsseldorf, Frankfurt iyo Hamburg. Sababta tan ayaa ah basaasnimo aan kala go 'lahayn oo ku socota NSA iyo adeegga sirta ee Mareykanka.
NSA waxay difaacdaa istaraatiijiyadeeda sida ay lagama maarmaanka u tahay la dagaallanka argagixisannimada. Intaa waxaa dheer, waxay qiraysaa in ay tahay, "haddii aadan haysan wax qarin, ma jirto wax cabsi ah". Nasiib darro, ilaalinta NSA waxay aad u sii kordheysaa marka la eego dagaalka ka dhanka ah argagixisada. Taleefankaaga, Skype, Wicitaanada Whatsapp waa la kormeeri karaa, xitaa haddii aadan waxba ka qaban argagixisada, adoo isticmaalaya "3rd Degree Friend Friend".
Intaa waxaa dheer, farsamooyinkan korjoogteynta ayaa ka hortagay weerarada 4 kaliya. Miyuu qiimeeynayaa asturnaanta si aan u aragno amni sugan oo aan caadi ahayn? PixelHELPER ma rumaysna, sababtaas awgeed ayaannu bilawnay ololahan.
Guuleysiga koowaad ka dib qiyaasta iftiiminta ee 13, qiyaasta toddobaadlaha iyo warbaahinta waaweyn:
Waa markii ugu horeysay ee macalinka xulka Germany ee CIA.
Waxaan nahay Buntesnachrichtendienst - kaqeybgal dimoqraadi ah oo dheeri ah Juun 15th, 2020Oliver Bienkowski